ARGENTINA chinodikanwa yokugadza 4,000 TO 5,000 CRYPTO ATMs pamusoro NYIKA - Blockchain News
Chivabvu 2, 2018 arun
ARGENTINA chinodikanwa yokugadza 4,000 TO 5,000 CRYPTO ATMs pamusoro NYIKA
Argentina anogona Nokukurumidza mutungamiri iri crypto ATM musika. Maererano omunharaunda vezvenhau, nyika muve makagadzirira kugamuchira pakati 4,000 uye 5,000 ATMs inotsigira rakapotsa dzeEurope.
Maererano CEO uye akatanga Odyssey Group, Sebastian Ponceliz, kuti ATMs haazorambi chete kushandiswa vanhu dzokubvisa mari asiwo pakushandisa rakapotsa dzeEurope, kuburikidza nokushandisa bi achitaura Bitcoin ATMs.
"Pane zvandinoshevedzera convergence mari inoita kuti kutishandisa marudzi akasiyana achishandisa vachibhadhara uye Exchange (mari, crypto, e-wallets, kuvimbika pfungwa, etc.) uye kuonana kwevanhu pfungwa nekuti izvo ATM kuti anogona Panorama akawanda dzeEurope, vanoshandura mari digitaalinen kupinda mumuviri ndiEzekieri,"Anotsanangura Ponceliz.
Odyssey Group ndomumwe makurusa ATM rinobatsirwa muUnited States, Mekisiko, Colombia uye Spain.
Mutongo wabatwa ne kambani ichangopera hurumende Argentinian vakasarudza kuchinja nemirau kubvumira dzakavanzika emakambani neImba ATMs avo zvitoro uye zvitoro.
Maererano Coin ATM Radar, Pari hapana Bitcoin ATMs anowanika Buenos Aires.
Pasinei zvivimbiso ...
Scientist paIndaneti ...
Previous Post:Scientist.com yakatanga blockchain-inobva date ongororo papuratifomu
Next Post:US zvemitemo kunzwa nyaya kuti blockchain zvitengeswa cheni
Chivabvu 8, 2018 pa 12:31 AM
Chivabvu 9, 2018 pa 12:57 AM
Chivabvu 20, 2018 pa 12:27 AM
Chivabvu 29, 2018 pa 3:31 AM